ဆြာအုပ် နှင့် ကိုလိုနီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့် ကိုလိုနီ
ဆြာအုပ် နှင့် ကိုလိုနီ
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Oct 13, 2012 in Photography | 30 comments
ဆြာအုပ် နှင့် ကိုလိုနီ ဆိုလို့ ဆြာအုပ်တစ်ယောက် နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်နေပြီလား.. သုပန္ဏကဂဠုဏရာဇာ ဘွဲ့ခံပြီး နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေးကားတွေ ရိုက်နေပြီလား မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဗျို့.. တစ်လောက wide lens လေးဝယ်လာတာနဲ့ စမ်းထားတဲ့ပုံတွေပါ.. ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက် အဦးတွေ လိုက်ပြီး လက်ဆော့ထားတာပါ..
အဲ ပုံလေးတွေပေါ်မှာ ခရက်ဒစ် လေးတွေ ထိုးထားတာကတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဂျာ.. ပုံတွေရဲ့ အောက်မှာ ပါတဲ့ နံပါတ်တွေက လတ္တီကျူ/လောင်ဂျီကျူ တန်ဖိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပီလုပ်ပြီး google map မှာ ထည့်ပြီး လွယ်လွယ်လေး ရှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်..
Located in Bogyoke Museum Lane, Near German Embassy, Nat Mauk Street, BAHAN Township)
Mahar Bandoola Road, Between Sule pagoda and Mahar Bandoola Garden Street
Between Mahar Bandoola Garden Street and Pansodan Street
Cnr of Pansodan Street and Maharbandoola Road
Cnr of Strand Road and Bo Aung Kyaw Road
Yangon Jetty View
Cnr of Strand Road and Pansodan Street
Cnr of Sule pagoda Road and Strand Road
Cnr of Sule Pagoda Road and Merchant Road
Cnr of Sule Pagoda Road and Strand Road)
Ministry of Inland Water Transportation
သူများတွေ ယူလို့ မရအောင် …
သူ့ဟာဂျီးကို အလယ်မှာ မိုးတိုးမတ်တက်ဂျီး ထားထားတယ်
(နံမယ် .. နံမယ် .. )
ဟဲ့.. အဲဒီ အလယ်ကဟာဂျီးနဲ့လုပ်စား နေရတာ.. ဟဲ့ …နံမယ် နဲ့လုပ်စားရတယ်ပြောတာပါ .. ဟိ
အဲ့ဒီ့ တိုကီနာ ကိုလာ ခိုး မိတော့မယ် နော့…………..။
တိုးရစ်တွေသိရအောင်.. လိပ်စာလေးတွေပါရေးပေး..ရန်ကုန် မြေပုံမှာ သွားလို့ရအောင်.. အမှတ်အသားလေးတွေလုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်..
အနည်းဆုံးတော့.. တိုးရစ်ဇင်လုပ်နေသူတွေ.. လိုအပ်တယ်ထင်တယ်နော..
တဂျီး လုပ်ပေးလို့ အက်ဒစ် ပြန်လုပ်ပြီးသွားပါပြီး.. ကျေးဇူးပါတဂျီးရေ.. ပုံတွေရဲ့အောက်မှာ လတ်/လောင် ထည့်ပေးထားတယ်.. အောက်ဆုံးမှာ မြေပံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.
၁၁-၁၆မမ အစွမ်း အံ့မခန်း
တိုကီနာ က ဗိုလ်ချူပ်ပြတိုက်နဲ့ ဘဏ် ၃ ပဲပါတယ်.. ကျန်တဲ့ wide shot က သူများဆီကငှားထားတဲ့ နီကွန် 10-24 နဲ့ဆော် ထားတာဗျ.. ဟီး
ပုံတွေကတော့ မိုက်တယ် အလယ်ခေါင်က ထွဋ်ကြီးနဲ့ သျှီက ၀င်ဝင်ဖျက်နေတယ်
လက်နဲနဲလွန်သွားလို့ အရန်းထင်းသွားတယ်.. ပိုမှိန်လိုက်ပါပြီ..
ဆြာအုပ်ရေ ကျမလည်း တခါတုန်းက ရန်ကုန်အကြောင်း ပိုစ့်လေး တပုဒ် ရေးဖူးတယ်။
“ကိုယ့်အတွေး သူ့အမြင်” ဆိုပြီး ဟိုဘက်ကလူတွေ ဒါမျိုးအဆောက်အဦးတွေ ကြိုက်ကြပုံပဲ ။
မပု ရဲ့ ပို့စ် လေးကို ဖတ်လိုက်ပါတယ်.. နှမြောစရာကောင်းတွေ အများကြီးပါ.. တချို့ ပြန်ပြင်နေတာတွေလဲရှိပါတယ်.. ပေါက်ကရ အရောင်တွေသုတ်တာက လဲ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်.. ဥပမာ မြို့တော်ခန်းမကို မဲနယ် ဆိုးသလိုမျိုး.. ခေါင်မိုးမှာ အင်တင်နာတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် လုပ်ထားတာတွေ အရမ်းရုပ်ဆိုး တယ် ထင်တယ်ဗျာ..
” St.Mary’s Cathedral Church ”
ဆြာအုပ် ရေ ၊
တစ်ခုသိချင်တာက ၊ St.Mary’s Church က ၊
Cathedral အဆင့် တကယ် ရထားပြီလားလို့ပါ ။
Cathedral ဆိုတာ Vatican / ပုပ်ရဟန်းမင်းက Endorse အသိအမှတ်ပြုရပြီး ၊
Vatican ကို အခွန်လဲ ဆောင်ရတယ်လို့ ကြားဘူးလို့ပါ ။
အထဲက ဆိုင်းဘုတ် မှာ အဲလိုတော့ရေးထားတာပဲ အဘဖောရေ..
ဆြာကြောင်ဂျီးကတော့လုပ်တော့မယ်..ဘိုလိုပလီအာမှုတ် တော့မလုပ်ပါရစေနဲ့ ဗျို့
ကမ္ဘောဇနန်းတော်လို့ခေါ်တဲ့ ချင်းချောင်း လည်း ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦးထဲပါမယ်နော်။
၀န်ကြီးများရုံး၊ဒဂုံ(၁)၊ဗိုလ်တစ်ထောင်(၆)၊လမ်းမတော် (၁)နဲ့ ရှေ့က ချပ်(ချ)၊…….
San Francisco ရဲ့ Tourist Attraction sites တွေထဲမှာ Victorian Houses ဆိုတာပါတယ်။တကူးတကကို သွားကြည့်ကြရတယ်။
ရှေးဟောင်း cable car ကိုလည်း တိုးရစ်တိုင်း စီးကြည့်ကြတယ်။ငယ်ငယ်က ကြည့်ရတဲ့ ဂျပန်ကား(Long Journey into love လား မမှတ်မိတော့ဘူး။မင်းသားက Golden Gate Bridge ဘေးမှာ စွန်လွှတ်တဲ့ကား၊အဲဒီထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ်)
ဆိုတော့ ဒို့ ဗမာပြည်မှာလည်း ဒီအဆောက်အဦးတွေကို တိုးရစ်တွေ ပြစားလို့ရလောက်တယ်။
ကျေးကျေးပါဂျို့.. ချင်းချောင်းကတော့ မရောက်သေးဘူးဗျ.. ၀န်ကြီးများရုံးကတော့ အရမ်းရိုက်ချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် အပြင်က သစ်ပင်တွေကာ နေတော့ အထဲဝင်ရိုက်မှ ရမယ်ဗျ.. ကျောင်းတွေက ရိုက်ရင် ပြဿနာရှိတယ်ဗျ.. အနဲဆုံးတော့ ခေါ်ရစ်ခံရတယ်.. ပုဂံမှာ ကျောင်းထဲက ကလေးတွေကို ရိုက်မိလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီး ခေါ်ရစ်ခံရလို့ဗျို့
မမြင်ဖူးသေးတဲ့ colonial building တွေကို တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးပါ ဆြာအုပ်ရှင့်…
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းဆိုတာကြီးကို မြင်ရင် ပြန်ချင်တယ်..
ဆရာအုပ်ရေ.. တလောက အသိတစ်ယောက်
ဝယ်လာပေးတဲ့ 30 Heritage Buildings of Yangon ဆိုတဲ့ စာအုပ်
အင်း..ဟုတ်သားပဲ.. တစ်ရက်လောက် သွားရိုက်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့
မြင်ဘူးနေကျဒီအဆောက်အအုံတွေကို ကိုလိုနီခေတ်နဲ့တွဲ မမြင်မိဘူး။ တစုတစည်းတည်း လိုက်ရှာထားတာ အကြံကောင်းပဲ။
ဓါတ်ပုံတွေမှာ ကားတွေလူတွေ ရှင်းနေပုံထောက်
ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ဖွင့်ရက်ဆိုလို့ကတော့ စကပ်တို၊ဘောင်းဘီတို၊ကြိုးတစ်လုံးရင်လျားနဲ့
ဟုတ်ပါ့ဗျာ. မရိုက်ခဲ့ရဘူး… တောက်